Momba anay - Suzhou Springchem International Co., Ltd.
Momba an'i Springchem
Suzhou Springchem International Co., Ltd. dia nanam-pahaizana manokana tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny famokarana fungicides simika isan'andro sy simika hafa tena tsara hatramin'ny 1990. Ny orinasa misy anay dia ao amin'ny faritanin'i Zhejiang. Manana ny famokarana manokana ny simika isan'andro sy ny famonoana bakteria izahay ary orinasam-teknolojia avo lenta miaraka amin'ny ivon-toerana injenieran'ny R&D monisipaly ary ny tobim-pitsapana mpanamory fiaramanidina. Nomena anay ho "mpamatsy fifehezana fividianana vidiny tsara indrindra" amin'ny kaonty lehibe. Ny vokatray dia amidy an-trano sy any ivelany, ny sasany amin'ireo vokatra andian-dahatsoratra manana fiaraha-miasa tsara amin'ny orinasa malaza maro any Shina. Izahay dia manome mihoatra ny akora simika faran'izay tsara, avo lenta, manome fahaiza-manao izay niafara tamin'ny fikarohana sy fampandrosoana nandritra ny taona maro tamin'ny famokarana, famatsiana ary fampiharana. Izahay dia mamokatra vokatra marobe izay azo ampiasaina amin'ny fikarakarana manokana sy ny indostria fanatsarana tarehy, toy ny fikolokoloana ny hoditra, fikolokoloana volo, fikolokoloana am-bava, fanaovana tarehy tarehy, fanadiovana ao an-trano, fikarakarana detergent sy fanasan-damba, hopitaly sy fanadiovana andrim-panjakana.
Fanombanana ny fiantraikan'ny tontolo iainana (EIA)
Nahazo fombafomba amin'ny famokarana tanteraka izahay. Ara-dalàna sy azo itokisana ny famokarana sy ny fiasa rehetra.
Nahazo ny fankatoavana rehetra momba ny fiarovana ny asa izahay: fahazoan-dàlana amin'ny famokarana fiarovana ary ny fanamarinana ny fanamarinana ny fiarovana ny asa.
Nahazo ny fankatoavana ny fiarovana ny tontolo iainana isika: fahazoan-dàlana amin'ny fandotoana ny fandotoana ao amin'ny faritanin'i Zhejiang.
Fanaraha-maso kalitao sy fitsapana sarotra
Nampiorina ny lazanay izahay tamin'ny finoana fa ilaina ny tsy fitoviana amin'ny kalitao.
Ao amin'ny laboratoara QC misy anay dia manana programa feno fanaraha-maso mikraoba isika.
Ny fanandramana antisepsis dia natao tamin'ny alàlan'ny fanahafana ny tena toe-javatra.
Ny famakafakana mikraoba amin'ny vokatra ratsy dia misy ihany koa.
Nomena anay ho orinasa teknolojia avo lenta amin'ny faritanin'i Zhejiang izahay, nalahatra ho an'ny National Credit Evaluation Center sy ny National Investigative Statistic Trade Association ho grade AAA Trust Enterprise ao amin'ny Chinese Building Material Trade. Izahay dia mandalo tetikasa teknolojia SME teknolojia avo lenta, izay mampiroborobo tokoa ny orinasa mankany amin'ny fampandrosoana haingana.
Ny vondrona lohataona ho avy dia hanatsara hatrany ny marika, marketing ary serivisy.
Ny orinasan-tsika dia niorina, ary nanjary mpitarika teo amin'ny sehatry ny famenon-tsakafo vovoka ao Shina ao anatin'ny 5 taona, manarona faritra lehibe ara-toekarena any Shina sy Azia atsimo atsinanana.
Ivon-toerana R&D napetraka.
Taorian'ny fivelarana fiaraha-miasa nandritry ny dimy taona niaraka tamin'ny vondrona R&D, nanangana tobim-pamokarana andiana fungicides simika isan'andro izahay, toa an'i Allantoin sns.
Vondrona vaovao miorina amin'ny fanondranana 100%: Suzhou Springchem International Co., Ltd dia niasa teo akaikin'i Shanghai.
Fikarohana momba akora simika manokana, toy ny BIT sns.
Ny tsipika famokarana iray dia nahazo ny loka tamin'ny habetsaky ny varotra lehibe nataony, ary ny vokatra iray dia nahazo loka: "mpamatsy fividianana fividianana vidiny tsara indrindra" avy amin'ny kaonty lehibe iray.
Fankalazana ny faha-10 taonan'ny.
11 Manatreha ny fampirantiana natao tany Thailandy: fanatsarana tarehy
Niorina tany London ny orinasa any ivelany.